Shiinaha Noloshiisa Tirada Marmarka Taallada Marwada Mount Carmel ee Iibinta Soosaarka iyo Warshadda | Farshaxan Fiican
Waxyaabaha marmarka leh
Xajmiga Nolosha Taallada marmar ee Lady of Mount Carmel ee ...
Warshadda qorrax dhaca qolof taallo libaax marmar casri ah oo iib ah
Habee Labada Lamaane ee Astaamaha Libaaxa Stone Stone Statues fo ...
Qaabab xajmi ah oo loo ekeysiiyay shabeel qurux badan oo shabeel iib ah
Taallo marmar ah oo midab isku dhafan leh
Xajmiga Nolosha Taallada marmar ee Marwada Buur Karmel iibka
Lambarka Moodalka: FMQ-225
Cabir: H ： 170 cm ama la qaabeeyey
Adeeg: Wax ka beddel la aqbali karo
Bixinta: T / T, Western Union
Kaniisad kasta oo dhiirrigelisa iimaanka iyo u-hibeynta Maryantii bikradda ahayd, taallo-baaxadda nolosha ee Maryantii bikradda ahayd ee ku taal Mount Karmel waa farshaxanka ruuxiga ah ee ugu habboon. Taaladeenu waxay ka samaysan tahay marmar dabiici ah. Iyo alaabtu waxay ku habboon tahay isticmaalka gudaha iyo dibedda.
Amarka Karmel gabi ahaanba waa mid layaableh, laakiin sida ku xusan fikradaha Santa Teresa, waxay rajeyneysaa in gabadheeda aysan sii ahaan doonin rasuul, iyo in gabadheeda ay caawin karto kaniisadaha iyo wadaadada ayna balaarin karto boqortooyada llaah. , Waxay jecel yihiin inay aqbalaan xamaasadda tukashada adduunka oo dhan.
Sawir gacmeedkeenna marmar waa mid gacmeed lagu xardhay, Kaniisadda Our Lady of Mount San Carmel waxay gacanta bidix ku haysataa ilmo qurux badan, oo xidhan taaj qurux badan iyo khamiis qurux badan. Cagaha cagaaran, oo sugaya mustaqbalka, isagoo dhoola cadeynaya iyo sankiisa oo qurux badan, oo muujinaya muuqaalka haybad, naxariis, farxad iyo xifdinta leh ee Bikrada, kaasoo ula dhaqmaya si faahfaahsan faahfaahin kasta. Dharka dabacsan wuxuu ku wareegsan yahay jirka oo dhan madaxa, qaabkuna wuxuu isu rogayaa mid Dabiici ah oo quruxsan, hadey ahaan laheyd qaabka taajka, muuqaalka dharka ama dharka intiisa kale.
Taallada Virgin Saint Karmel waxay ka samaysan tahay marmar cad oo dabiici ah. Tani waa taallo marble diineed oo tayo sare leh, aad u xoogan, kuna haboon gudaha iyo banaanka, waxaana loo isticmaali karaa jawiga cimilada qalafsan. Dhammaan farshaxankeenna marmarka ah waxaa gebi ahaanba gacmahooda ku sameeyey farsamo yaqaanno marble xirfadlayaal ah waxayna taariikh dheer ku leeyihiin soo saaridda taallooyin diimeed.
Waxaa ku xardhay gacmaheenna xardhan xirfadle marmar ah. Faahfaahinta oo dhan si fiican ayaa loo shaqeeyaa. Haddii aad xiiseyneyso farshaxankeena diiniga ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad badeecad faahfaahsan. Dabcan, waxaad sidoo kale ka daawan kartaa naqshadaha kale ee farshaxan halkan.
Hore: gacanta ku xardhay bust marmar aad u qurux badan oo iib ah
Xiga: Marble St.Martel Custom ayaa laga sameeyay Tayepac Hill taalada iibka ah
Kaabayaasha Factory marmar cad qurux badan Virgin Ma ...
Qaab-dhismeedyo taallo diimeed loo sameeyay Custom
taalada quruxda badan ee marmar ee Qalbiga Xurmaysan ee ...
Marble dibedda diinteena haweeneyda Lourdes st ...
Tirada nolosha Taaladaha diinta ee St. Francis Gard ...
Taallada marta warshadda taallo pieta taallo iib ah
Cinwaanka: Rm No.15a10-15a11, Dhismaha Zhongyuan, No.368 Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha